I-Archos 101 ngokucokisekileyo, ukuba uyayifunda awusayi kuphinda ucinge ngenye ithebhulethi | I-Androidsis
El Galaxy Tab idale isiphithiphithi xa iboniswa kwaye uninzi sele luyibiza ngokuba yi-anti iPad, i-iPad yokubulala okanye ububhanxa obufanayo kuphela ngenjongo yokuphakamisa iimpikiswano ezingenangqondo kunye nokukholelwa komnye umntu ngokutsho loo nto. Esinye isixhobo esele sikhona e-IFA, esathi sanikezelwa kusuku olungaphambili kwaye sele singabonwanga, kunokuba yinto elungileyo kuthi sonke esikhangela ithebhulethi ehamba nayo. Inkqubo ye-Android, sibhekisa kubo IArchos 101.
Le thebhulethi ine 10,1 intshi capacitive touch screen kunye nesisombululo seepikseli ezingama-1024 × 600, iprosesa yayo yi I-ARM Cortex A8 kwi-1ghz isantya esine-OpenGl ES 3 2.0D yemoto ekhawulezayo. Njengoko sibona okwangoku, ayikhangeleki imbi.
Inekhamera yangaphambili ye-VGA elungele ukwenza iinkomfa zevidiyo ngoqhagamshelo lweWifi (802.11 b / g / n) kuba ayinalo uqhagamshelo lwe-3G. I-Bluetooth 2.1 + EDR ikwakhona kule Archos 101. Ewe sinokwenza i-tethering ngoqhagamshelo lweBluetooth, iWi-Fi yecwecwe kunye nefowuni yethu ukuze sihlale sixhuma
Ngokumalunga necandelo lokufaka kunye nokuphuma konxibelelwano, siyabona ukuba inezibuko lokubamba le-USB 2.0, esinokuthi sidibanise kuyo iidrive zangaphandle, iikeyboard, iimpuku okanye iinkumbulo, ikhadi le-SD kunye nemveliso encinci ye-HDMI. Imveliso eyi-3,5 mm yee-headphone, i-accelerometer, imakrofoni kunye nesithethi esidibeneyo zezinye izinto ezinazo.
Ungathini, ngaba ufumanisa ukuba iinkcukacha zayo zamkelekile? Siyaqhubeka.
Iya kuthengiswa ngokugcinwa kwangaphakathi kwe-8 Gb kunye ne-16 Gb enokwandiswa ngezibuko elikhankanywe apha ngasentla. Kwinxalenye yayo yangasemva inonyawo lokuxhasa olusonga ngaphezulu kwesixhobo esinye, sifihliwe xa kungafuneki. Ngebhetri yayo ye-lithium polymer, iya kuba nokuzimela iiyure ezingama-36 zidlala umculo, iiyure ezingama-7 zidlala iividiyo kunye neeyure ezili-10 ngokukhangela kwiwebhu.
I-Android 2.2 okanye eyaziwa ngokuba yiFroyo Yinguqulelo eza kuyizisa xa ikhutshwa kodwa iya kufumana uhlaziyo kwiGingerbread xa ikhutshwa. Ayibonisi naluphi na uhlobo lojongano lwayo kwaye sine-Android ecocekileyo. Apha sifumana inqaku elingalunganga kwaye mhlawumbi inye kuphela kwaye ayibandakanyi usetyenziso lukaGoogle kwaye ewe kunjalo I-Android Market. Unokufikelela kwivenkile yakho ebizwa ngokuba yiArchos Ii-AppLibs apho kukho amawaka ezicelo. Njengesalathiso ndingakuxelela ukuba kwiArchos 5 yangoku engazibandakanyi ezi zicelo, khange kuthathe xesha lide ukuzifaka ngokungafanelekanga, kwaye andizukuthetha ngaphezulu.
Kwi-270x150x12 mm kunye ne-480 gram yobunzima, iza ilayishwe ngothotho lwezicelo onokuthi uqale ngazo ukonwabela le cwecwe, njenge-Aldiko, i-Ebuddy, iWikipedia, iTouiteur okanye i-Fring, phakathi kwabanye.
Ezi ntlobo zezixhobo zinokusetyenziswa okuninzi kodwa ikakhulu zenzelwe ukusetyenziswa kakhulu kwemultimedia, nokuba kungokuya kwiwebhu okanye ngeefayile ezilayishwe kwitafile enye, ngenxa yesi sizathu le Archos 101 iyahambelana nokudlalwa kweMPEG-42 HD (ukuya kuthi ga ku-720p, 30 fps @ 6Mbps), MPEG-42 (ASP @ L5 AVI ,, 30 fps @ 8Mbps), H.264 HD (HP@L3.1 ukuya kuthi ga kwi-720p 30 fps @ 5Mbps), WMV9 / VC1 (AP ukuya kuthi ga kwi-720p, 30 fps @ 10Mbps), M-JPEG (iMoto yeJPEG yeVidiyo) kwisisombululo seVGA, ngokuzikhethela kwi-plug-in (enokukhutshelwa kwi-www.archos.com): ICinema: MPEG-2 (isigqibo seDVD MP / D1, 30 fps @ 10 Mbps)) kunye nezinye iikhowudi ezinokukhutshelwa sinokudlala nazo I-AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF, 3GP. Kwicandelo leaudiyo iyahambelana nokudikhowuda I-MP3 CBR kunye neVBR, iWMA, iWMA-Pro 5.1, WAV (PCM / ADPCM), AAC, AAC + 5.1, OGG Vorbis, FLAC kwaye yamkela imibhalo engezantsi ngolwandiso .srt, .ssa, .smi, .sub.
Ngokuzisa Android 2.2 uya kuba nokuhamba okupheleleyo kwiwebhu ukuze uhambelane nomxholo wefleshi. Naye ngokunjalo IArchos 101 idibanisa Iiprotokholi zeSamba kunye neUpnP Ke sinako ukusasaza nawuphina umxholo wemultimedia esinayo kwii-hard drive zangaphandle eziqhagamshelwe kwinethiwekhi okanye nayiphi na iPC okanye iMAC kwithebhulethi. Ukuba siya egumbini lethu singadlala imuvi esinayo kwi-multimedia hard drive kwigumbi lokuhlala kwaye kwii-intshi ezili-10 umboniso kufuneka wamkelwe.
Okwangoku ndicinga ukuba le thebhulethi ihanjiswe kakuhle kodwa enye yezona zinto zinomdla inokuba lixabiso layo, iya kufumaneka ngo-Okthobha ngexabiso eliza kuba malunga ne-300 yeedola kumthamo we-8 GB kunye ne-350 yeedola kwi-16 GB.
Iividiyo apha kwaye apha
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Ezinye izixhobo » IArchos 101 ngokucokisekileyo, ukuba uyayifunda awusayi kuphinda ucinge ngenye ithebhulethi
UAlvarez del Vayo sitsho
Kubonakala kum ukuba sele ndiyazi ukuba yeyiphi iThebhulethi endiza kuyithenga.
Ngendlela, amaxabiso amarhe okuba afane nee-euro
Phendula Álvarez del Vayo
Ewe ewe, ijongeka intle kakhulu. Okwangoku, ndiza kulinda iKrisimesi ukuba iimodeli ezininzi ziphume kwaye ndinokukhetha kakuhle
Kwaye kutheni ingabandakanyi iiGoogle Apps? Ngeliphandle ngaphandle kweNtengiso ye-Android ilahlekelwa kakhulu. Ewe ungabakrwitsha, kodwa andicingi ukuba lolona khetho lulungileyo.
Ngaphandle koko, isixhobo esikhulu.
Ayibandakanyi intengiso kuba uGoogle akaqinisekisi ngesixhobo. UGoogle umisela uthotho lwezinto ezincinci eziyimfuneko ukuqinisekisa isixhobo ukuze sikwazi ukufikelela kwiNtengiso kwaye oku, umzekelo, ayinayo i-GPS echanekileyo.
Kuba? Kuba? Kutheni le nto ingabandakanyi iGPS? Umntu uhlala eswele i-5 ngokobunzima. Ukuba ayenzelwanga nto, yeyenye into.
Ngaba kubiza imali eninzi ukwenza i-OS efanelekileyo?
Uninzi olwenziwe ngokwezifiso, imbali engaka kunye nokusetyenziswa kwabathengisi, kwaye akukho mntu ugxile ekwenzeni inkqubo ingabinamthungo ngokupheleleyo?
Ngalo mandla kunye nezo mpawu ndicinga ukuba inehardware eyaneleyo yokutshabalalisa ezinye iipilisi (okanye ii-iPads), kodwa i-OS ihlala icotha ...
Kuya kufuneka silinde de bafumane into ehamba kakuhle ngokufanelekileyo. Ndiyathemba ukuba i-Samsung iyilungisa ngokukhawuleza le ngxaki ngokukhawuleza ...
Ndineli cwecwe kwiveki e-1 (ibisisipho seKrisimesi) kwaye ndiyakuqinisekisa ukuba ilulwelo ngokugqibeleleyo ... ke ukuba awuyisebenzisanga, ungathethi ngaphambi kwexesha, kwaye ukuba uyisebenzisile kwaye uthi , awazi ^ ^
UJoseph Baena sitsho
Yena yena. Ndiyabona ukuba imfundo ayisiyiyo into eyifunayo
Phendula kuJosé Baena
Ndingayi-odola phi? Ndivela eArgentina kwaye iArchos ayikho apha = (
Ndiyibhukishe kwi-Expansys, iyakuthengiswa kwi-Intanethi kwiwebhusayithi yeArchos okanye andazi ukuba iAmazon ihamba eArgentina. Konke okugqibelele
Akukho Ntengiso, akukho GPS, akukho 3G.
Kuthekani ngentengiso yeapps, ngaba oko kuthetha ukuba awukwazi ukufaka usetyenziso lwe-android?
Ngaba ingasombululeka ngandlela thile?
Ayinayo i-app yentengiso, kodwa inelayibrari yayo yesicelo ebizwa ngokuba yi-APPLIB. Iyafana kakhulu kwi-appmarket
Ithiyori kwakufuneka iye kwintengiso phakathi ku-Okthobha kwaye namhlanje akukho nto yenzekayo ngaphandle kwe-presale ye-16 Gb, ndiyavuma ukuba ndiyinto engaqhelekanga kodwa ayinakuba yile mveliso ilungileyo ngexabiso elifikelelekayo. Ubuncinci into endiyifunayo kukuba ndibukele i-FB MSN yam yemuvi okanye incwadi kuloliwe ongaphantsi. Owu mama, ufuna ukuba nayo,
ukufa kwi-ipad jalajala
Ithebhulethi ayinayo iGPS okanye i-3G kuba yenzelwe ukusetyenziswa ekhaya, andiboni bantu abaninzi esitratweni baziqhelanisa nale tablet ngenxa yobungakanani bayo. Ndine-archos 5 kwaye inayo iGPS nangona ingenayo imakethi esemthethweni nayo. Le ayisiyongxaki kuba ngala mini bendinayo ekhaya, ndayifaka ngokungafanelekanga.
Enye into ekuthethwa ngayo kukuba ukuba awukwazi ukufaka usetyenziso lwe-android. Ewe, ewe, ukuba kunokwenzeka, nayiphi na .apk ifayile inokufakwa ngokugqibeleleyo, ke ukuba ukhuphela usetyenziso kwi-intanethi kwi-pc okanye kwithebhulethi uqobo, ungayifaka ngaphandle kweengxaki.
Ngokubhekisele kwi-3G, ngaphambi kokuba unditye usithi ayibalulekanga, ndicinga ukuba kunjalo, kodwa kuba ayiyithwali, ixhasa ukubethelwa ngeBluetooth kwaye andazi nokuba nge-wifi, ke ukuba sinesidima mobile, sinokunxibelelana ne-intanethi ngaphandle kweengxaki ezinkulu, okwangoku ndidibanisa ii-archos 5it zam ne-sony eokia w995 kwaye isebenza ngaphandle kweengxaki, ikwasebenza nge-n97 ...
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, ungabathumela kwi-gruncho2004 (apha) gmail.com
Yandigqiba iintsuku ezi-2, i-shit, i-intanethi ebulalayo, i-YouTube, akukho VAT, uxhoma rhoqo
Ewe ndigqibelele, andazi ukuba uya kuba nearchos 101 okanye isitena ...
Nditsho ndimbombozele sitsho
Kubonakala kum ukuba awazi ukuba ungasebenza njani nengelosi yakhe, ndinee-archos 10, i-galaxy tab kunye ne-ipad, kwaye ndiyakuxelela ukuba xa uyayazi indlela yokuyicwangcisa, yithebhulethi enomdla ngokwenene .
Kuhlala kukho abo banokubiza imali encinci kule micimbi kwaye bahambe ngokulula (ipad)
molweni bafo, ndicinga ngokuzinika ithebhulethi, kwaye ndinamathandabuzo aliwaka, phakathi kwe-archos 101 okanye i-ipad. ii-ipad zokusebenza zinomtsalane kakhulu, kwaye kulula ukuzifaka, ngaba ziyafana kwiiarchos?
ukuba umahluko wexabiso uyamangalisa, kodwa ngaba kufanelekile ukuchitha imali encinci ukuze ufumane iziphumo ezifanayo? Umbuliso
Ewe, kuxhomekeke ekusebenziseni oza kukunika, ndikhetha ii-archos ngenxa yenkqubo yokusebenza eyonyukayo, ndiyifumana inomtsalane ngakumbi xa isiza kungxakana nayo, kuba nge-iPad yonke into iyaphula amabanjwa, ukuba uyafuna ukwenza into enomdla ...
Kwelinye icala, iiapps ezihlawulwa kwivenkile yeapp, uninzi lwazo kwimarike ye-android zisimahla.
Kwaye ukuba ufuna i-android egquma ngokwenyani i-ipad ekusebenzeni kunye namandla, jonga kwi-tab ye-galaxy, ndiyithenge kwiintsuku ezi-3 ezidlulileyo kwaye ndonwabe ngakumbi, kwaye ndiyathetha ukuba, inamandla ngakumbi kune archos ...
Kwi-todoumpc banamaxabiso aphantsi kunezinye iivenkile, kwaye ine-3G, ebaluleke kakhulu kum.
Ke ukuba sibeka ii-archos, i-ipad kunye ne-samsung esikalini, ngaphandle kwamathandabuzo ndiza kunamathela kwi-samsung.
Enkosi kakhulu ndiyakrokra, ndiza kuyijonga, nangona indiphosa umva kancinci siscreen esinayo i-Samsung,
Ukuba kungenxa yesayizi, ndiyayiqonda, isixhenxe, kwaye yinto yobuqu leyo, kodwa ukuba yeyomgangatho, ingcono kunaleyo yearchos, kukukhanya iminyaka kude.
Kubuthathaka ngakumbi kukuchukumisa, masithi yi-7-intshi ye-iPad.
molo .. bandinike ii-archos10.1 (8 gb) kwaye andazi nokuba lilishwa okanye yintoni kodwa sele nditshintshe u-4 !!!! Kuqala ndafumana i-16 gb enye, kwaye i-tj yadubula, kuba kwakungekho-16 gb, ndonelisekile yenye ye-8 ... kodwa ndine-4 !! Kuqala, ii icon kwiscreen zijikeleza apho zifuna khona, i-2 yahlala ixhonyiwe kwaye ayiphendulanga xa ndiphawula uphawu, kwaye i-3 umfanekiso uye ujike ujonge ezantsi kwaye kukho umgca kwiscreen ongaphenduliyo kwangoko , Kufuneka ndibambe i icon kwaye kunzima nokuba aphendule… .Ndibuzisiwe ukuba yinto eqhelekileyo na le !!! !!! Andikholelwa ukuba ndine-4 kwaye ayisebenzi njengoko kufanelekile okanye njengoko bendilindele ... ukuba umntu angandixelela into nceda !!!!!
Ndinayo kwaye ilungile kum kuzo zonke iinkalo.
Inomdla onjani, ukuba abo bamrhanelayo bathumela umyalezo kuphela kwaye abaphinde baviwe kwakhona.
KwiMARIEL: Ndicinga ukuba ivenkile oyithenge kuyo inento enesiphene, zama ukubuyisa imali yakho uyithenge kwenye indawo.
PS Kukho i-iPad ekhaya kwaye ngokucacileyo ibhetele kwaye iyamanzi ngakumbi, kodwa njengesiqhelo, ngaphandle kokwenza "i-jailbreak", ayiyeki ukuba yinto enesikrini esinye, kodwa akukho nto iyenye.
Jacovo, enkosi kakhulu, inyani kukuba okuncinci ndikwazileyo ukukubona kundithakathisile kwaye ndiyathabatheka kukuba ndifuna iarchos !!!! Ndihlala ndiyikhangela kwi-intertet ndiyathemba ukuba sele ndinayo! Enkosi kakhulu!!!
Ndicinga ukuba kuhle. Ukusebenza kakuhle kakhulu. Kodwa yinjakazi engenayo i-3g. Oko kuthetha ukuba asinakuba nenqanaba ledatha kwaye sihambe naphi na apho ufuna khona.Iyiphi imodem ye-usb ebanjwe ewe. Kodwa yintoni esele siqeshe into enje kwiselfowuni yethu?